SC Mutongi: inoyevedza app yeiyo gamepad ine yekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
SC Mutongi: inoyevedza app yeiyo gamepad ine yekuvandudza
SC Mutungamiriri chirongwa chakanakisa o chishandiso chine inonakidza uye inonzwisisika graphical interface iyo yakagadziriswa kuti inyatso kugadzirisa iyo Steam chinodzora, Mutambo wemutambo wakakurumbira weValve wevatambi. Zvakanaka, ikozvino vane maviri matsva kuburitswa kana matsva aunonyatsoda. Nekudaro, vagadziri vayo vanopa zviratidzo zvekuti vanoramba vachishanda nesimba kuvandudza chirongwa ichi nhanho ...
Chekutanga pane zvese, ivo vakaburitsa yazvino gadziriso kana kuvaka kwechombo, vhezheni v0.4.6 ndedzipi shanduko dzinonakidza. Zvinoenderana neanogadzira, mafaera ekumisikidza izvozvi akashandurwa kuita fomati yazvino, saka haufanire kuchengetedza kuenderana neshanduro dzekare. Pamusoro pezvo, kutsigirwa kweRetroarch RemotePad protocol kunowedzerwa, zvichikubvumidza iwe kushandisa chero smartphone neRetroArch yakaiswa sepikicha yemutambo. Ehe, shandisa nharembozha yako semutongi wemutambo.Pamusoro pezvo, kumwe kuvandudzwa kwakabatanidzwa maererano nemashandiro uye zvimwe zvipembenene zvakakanganisa zvinhu zvakati wandei mushanduro yapfuura zvakagadziriswa, pakati pazvo iyo yakaburitsa scc-daemon ichirovera neSteam Play uye iyo UI yakagadziridzwa zvakare. Uye kana izvo zvikaita sezvidiki kwauri, kune zvekare vhezheni yekuyedza kana kusunungura, vhezheni v0.4.9.2, mune yakawanda kodhi SC Controller kutsigira mamwe mapuratifomu.
Izvi zvinosanganisira kutsigira NetBSD, OpenBSD, XInput pasi peWindows 8 uye nezvimwe zvakawanda. Kunoshamisa kufambira mberi kweiyi app iyo zvakare inoshanda pasi peLinux sezvaungave uchitoziva. Kana iwe uchida zvimwe zvakawanda nezvazvo kana kuwana kodhi yekodhi yayo, kurodha pasi, kubatana, kana kuona shanduko dzakapetwa dzazvino, unogona kushanyira iyo GitHub peji panogarwa chirongwa ichi kubva kune imwechete iyi link. Ndinovimba unofarira shanduko uye uve neruzivo rwakanaka nazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » SC Mutongi: inoyevedza app yeiyo gamepad ine yekuvandudza
Luisa Sung akadaro
Uye zvakadii nezve recalbox rutsigiro?
Pindura Luisa Cantado
Kodachi 5.6 yekuvandudza vhezheni yakaburitswa